Kurega basa | Law & More BV
Blog » Kurega
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kumiswa kwechibvumirano chebasa, kana kusiya basa, chinhu chinodiwa. Izvi zvinogona kunge zviri izvo kana mapato ese achifunga nezvekurega basa uye vogumisa chibvumirano chekumisa mune izvi. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve kugumiswa nekubvumirana pamwe uye chibvumirano chekumisa pane yedu saiti: Kushairal.site. Uye zvakare, kumiswa kwechibvumirano chebasa kunogona kutaridzika kuchidikanwa kana chete rimwe chete remapati richida kusiya basa. Semuenzaniso, mushandi anogona kunzwa kuda, nezvikonzero zvakasiyana, kumisa chibvumirano chebasa zvichipesana nekuda kweumwe mubati, mushandirwi. Mushandi ane sarudzo dzinoverengeka pane izvi: kumisa kontrakiti yebasa achishandisa chiziviso kana kuti ichibviswa nekuendesa chikumbiro chekuparadzwa kudare. Muzviitiko zvese izvi, zvakadaro, mushandi anofanirwa kufunga mamwe maganho anoiswa nenzvimbo dzakakodzera pane idzi sarudzo dzekusiya basa.
Kubviswa kwechibvumirano chebasa nekuzivisa. Kubviswa kamwechete kwechibvumirano chebasa kunonziwo kugumisa nechiziviso. Mushandi anosarudza nzira iyi yekurega basa here? Ipapo mutemo unorayira nguva yekucherechedza zviri pamutemo inofanirwa kucherechedzwa nemushandi. Zvisinei nekureba kwenguva yechibvumirano, ino nguva yekucherechedza inowanzo kuve mwedzi mumwe chete kumushandi. Iwo mapato anotenderwa kutsauka kubva panguva ino yekuzivisa muchibvumirano chebasa. Zvisinei, kana nguva yekucherechedzwa nemushandi ichiwedzerwa, hanya inofanira kutorwa kuona kuti nguva yacho haipfuure muganho wemwedzi mitanhatu. Mushandi anochengeta here nguva yakabvumiranwa? Muchiitiko ichocho, kumiswa kuchaitika kunopera kwemwedzi uye basa rinopera pazuva rekupedzisira remwedzi wekarenda. Kana mushandi akasatevedzera nguva yakabvumiranwa, ipapo kumiswa nechiziviso hakuzi kwemutemo kana nemamwe mazwi ane mhosva. Pakadaro, chiziviso chekumiswa nemushandi chinogumisa chibvumirano chebasa. Zvisinei, mushandirwi haasisina chikwereti uye mushandi anogona kunge ane chikwereti. Iyi muripo inowanzo kuve nemari yakaenzana nemubhadharo wechikamu chenguva yekuzivisa iyo isina kucherechedzwa.
Kuva nechibvumirano chebasa chakamiswa nedare. Kunze kwekumisa chibvumirano chebasa nekupa ziviso, mushandi anogara aine mukana wekunyorera kudare kuti aunze kuparara kwechibvumirano chebasa. Iyi sarudzo yemushandi iri imwe nzira kune kudzinga ipapo uye haigone kubviswa muchibvumirano. Mushandi anosarudza iyi nzira yekumisa here? Ipapo anofanirwa kutsigira chikumbiro chekunyorwa nekunyora uye nezvikonzero zvinesimba sekutaurwa kwazviri muchinyorwa 7: 679 kana chinyorwa 7: 685 ndima 2 yeDutch Civil Code. Zvikonzero zvinokurumidza zvinowanzo kunzwisiswa kuti zvinoreva (shanduko mu) mamiriro anoita kuti mushandi asatarisirwe zvine musoro kubvumidza chibvumirano chebasa kuti chienderere mberi. Mamiriro ezvinhu akadaro akakodzera here uye kuti Subdistrict Court inopa chikumbiro chemushandi here? Muchiitiko ichocho, iyo Subdistrict Dare inogona kumisa chibvumirano chebasa nekukurumidza kana pane imwe nguva inotevera, asi kwete nemhedzisiro. Chikonzero chinokurumidza chiri nekuda kwechinangwa kana kukanganisa kwemushandirwi here? Ipapo mushandi anogona zvakare kukumbira muripo.
Mushandi akafunga kusiya basa here nekugumisa chibvumirano chebasa newaanoshandira? Zvino izvi zvinowanzoitika zvichinyorwa kuburikidza nechiziviso chekumisa kana kusiya basa. Mutsamba yakadai itsika kutaura zita remushandi uye muoni pamwe neizvozvo uye kana mushandi agumisa chibvumirano chake. Kuti tidzivise kusawirirana kusiri madikanwa nemushandirwi, zvinokurudzirwa kuti mushandi avhare tsamba yake yekumisa kana kusiya basa nechikumbiro chegwaro rekutambira uye kutumira tsamba neemail kana netsamba yakanyoreswa.
Zvisinei, kugadzirisa kwakanyorwa kwekudzingwa hakusi kwekumanikidza uye kunowanzo shandira chinangwa chekutonga. Mushure mezvose, kumiswa chiito chisina yemutemo chiitiko uye nekudaro chinogona zvakare kuitwa neshoko. Saka zvinokwanisika kuti mushandi azivise waanoshandira nemuromo chete muhurukuro yekumiswa kwechibvumirano chebasa uye nekudaro kudzingwa. Nekudaro, nzira yakadaro yekusiya basa ine zvipingaidzo zvakati wandei, sekusaziva chokwadi chekuti nguva yekuzivisa inotanga rinhi. Zvakare, hazvipe mushandi rezinesi kuti adzokere kune zvirevo zvake uye nekudaro anodzivirira kusiya basa.
Kusungirwa kuferefeta kune waunoshandira?
Anoshandira anosiya basa here? Nyaya yematare yakaratidza kuti pakadaro mushandirwi haangovimbe kana nekukurumidza kuti avimbe kuti izvi ndizvo chaizvo zvinoda mushandi. Muzhinji, zvinotarisirwa kuti zvirevo kana maitiro emushandi zvinoratidza zvakajeka uye zvisingaenzaniswi chinangwa chake chekudzinga. Dzimwe nguva kuferefetwa kunoitwa newaunoshandira kunodiwa. Zvirokwazvo, mune nyaya yekurega basa nemushandi, mushandirwi ane basa rekuongorora, sekureva kweDare Repamusorosoro reDutch. Pahwaro hwezvinhu zvinotevera, mushandirwi anofanira kutanga aongorora kuti kudzingwa kwaive here kwaive chinangwa chemushandi wake:
Nhanho iyo mushandi paanoona mhedzisiro
Nguva iyo mushandi aifanira kuongorora sarudzo yake
Paunenge uchipindura uyu mubvunzo kuti mushandi ainyatsoda kupedza basa, chakatemwa chinoshandiswa. Kana, mushure mekuferefetwa nemushandirwi, zvinoita sekunge kudzingwa kwaive kusiri iko chaiko kana kuti chaicho chinangwa chemushandi, saka mushandirwi haagone, musimboti, kuramba mushandi. Zvirokwazvo kwete kana "kutora kumashure" mushandi asingakuvadze waanoshandira. Muchiitiko ichocho, hapana mubvunzo wekudzingwa kana kumiswa kwechibvumirano chebasa nemushandi.
Pfungwa dzekutarisisa kana ukasiya basa
Ko mushandi afunga kuenderera nekusiya basa here? Ipapo zvakare zvine hungwaru kuteerera kune anotevera mapoinzi:
Zororo. Zvinogoneka kuti mushandi achiri nemazuva mazhinji ezororo aripo. Ari mushandi ari kuibvisa here? Pakadaro, mushandi anogona kutora mazuva asara ezororo achitaurirana kana kuti abhadharwe pazuva rekudzingwa. Mushandi anosarudza kutora mazuva ake ezororo here? Ipapo mushandirwi anofanira kubvumirana neizvi. Iye mushandirwi anogona kuramba zororo kana paine zvikonzero zvakanaka zvekudaro. Zvikasadaro mushandi anobhadharwa mazuva ake ezororo. Mari iyo inouya munzvimbo yayo inogona kuwanikwa pane yekupedzisira invoice.
Kubatsirwa. Mushandi akagumiswa kontrakiti yebasa achavimba zvine mutsindo neMutemo weInishuwarenzi Yekusashanda. Nekudaro, iyo chikonzero nei uye nenzira iyo chibvumirano chebasa chakamiswa chinokanganisa mukana wekutora maricho ekushaya basa. Kana mushandi akarega basa, mushandi kazhinji haana kodzero yekuwana mabasa
Iwe uri mushandi uye unoda kusiya basa here? Wobva wabata Law & More. At Law & More isu tinonzwisisa kuti kudzingwa ndeimwe yenzira dzinosvika kure mumutemo webasa uye ine mhedzisiro inosvika kure. Ndosaka tichitora nzira yako pachedu uye tinogona kuyedza mamiriro ako uye mukana pamwe newe. Iwe unogona zvakare kuwana rumwe ruzivo nezve kudzingwa uye masevhisi edu pane yedu saiti: Kushairal.site.
Previous Post Zvinotarisirwa nemushandirwi nemushandi zvinoenderana neMutemo Wekushanda
Next Post Mamiriro ezvinhu mumamiriro ekubatanidza mhuri